"Aza manasa-tena hanankarena, aza entina amin’izany ny fahendrenao. Moa hampanarahinao azy va ny masonao, nefa tsy ao intsony izy? Fa maniry elatra tokoa izy ka manidina toy ny voromahery ho eny amin’ny lanitra." Ohabolana 23:4-5
Fanoharana vitsivitsy; Lioka 12:13-21
Famintinana: Nitombo harena ity lehilahy iray. Te hanorina trano fitehirizam-bokatra vaovao izy. Hoy izy: “Ry fanahy ô, manana fananana be voatahiry ho amin’ny taona maro ianao; mitsahara, mihinàna, misotroa, mifalia”. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: “Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharìnao?”.
Heviny: Misy fomba roa maha mpanankarena: tahaka ity lehilahy adala ity, ny olona dia mety hanana harena eto an-tany, nangonina tam-pitiavan-tena. Fa mety ho Andriamanitra mihitsy koa no mampanankarena ny olona. Amin’ny fomba ahoana? Tsy amin’ny asa mendri-piderana, fa amin’ny fandraisana izay atolotr’Andriamanitra, Izy tenany mihitsy, dia ny fanamarinana, ny famelan-keloka, fieritreretana milamina, fanantenana ny mandrakizay.
Fampiharana: Manao ity fanoharana ity ny Tompo, satria nasaina nitsara ady lova. Nohararaotiny izany mba hampiharihariana ny fototry ny tsy fifanarahana, dia ny fahihirana sy ny fitiavana te hanana bebe kokoa hatrany. “Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra” (1 Timoty 6:10). Misy zavatra sarobidy kokoa noho ny fanangonana harena ho an’ny fotoana fohy iainantsika eto an-tany. Aoka hihevitra ny fanahintsika, ka ny fotoana maharitra no banjinina amin’izany. Manana ny fiainana mandrakizay ve isika? Antsoin’Andriamanitra hoe adala izay tsy mba mieritreritra ny amin’izany.
Ny tena fitsinjovana ny hoavy dia ny fitokisana amin’Andriamanitra. Fantany izay ilaintsika isanandro: “Ny Rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany” (Lioka 12:30). Aoka hatao lohalaharana ny tombontsoany, ary Izy no hiantsoroka ireo zava-manahirana antsika isanandro.